प्रकाशित मिति: 2015/08/12
रामकृष्ण तिमिल्सिना, प्रबन्धनिर्देशक –हिमालयन सिनेरी ट्रेक्स एण्ड एक्स्पेडीसन
वि. सं. २०३९ सालमा धादिङको त्रिपुरेश्वर गाविसमा जन्मिनुभएका रामकृष्ण तिमिल्सिना हिमालयन सिनेरी ट्रेक्स एण्ड एक्स्पेडीसनका सञ्चालक हुनुहुन्छ । बाल्यकाल देखि खेलकुद, ट्रेकिङ, संगित आदिमा गहन रुची राख्नुहुने तिमिल्सिना १६ वर्षकै उमेरमा राजधानी छिरेर अध्ययनसँगै एडभेन्चर ट्राभल कम्पनीहरुमा आवद्ध रहिआउनु भएको छ । विभिन्न कम्पनीहरुमा गाईडको रुपमा काम गर्दा यस क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालिसक्नु भएको छ, उहाँले । सन् २००६ सालदेखि हिमालयन सिनेरीमार्फत उहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर उनै तिमील्सिनासँग गन्तब्य नेपालका संवाददाता सुवास भट्टले गरेको गरेको सम्बाद :
विनासकारी भूकम्प गएको अहिले साढे तीन महिना वितिसकेको छ, यसविचमा तपाइँ आफुले पर्यटन प्रबर्दनका लागि के गर्नुभयो ?
भूकम्पबाट सबैभन्दा बढता प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो । हामी पर्यटन क्षेत्रमै क्रियाशिल व्यवसायी भएकाले यो क्षतिले हामीलाई ठूलो मार पर्न गएको छ । तै पनि मानविय भावनाका हिसावले तत्कालिन खाद्यान्न र आवासका लागि प्रभावित क्षेत्रमा गएर पीडितहरुलाई सक्दो राहत वितरण गर्‍यौँ । यसबाहेक भूकम्पले सबै सक्यो भन्ने एउटा नकारात्मक प्रचार फैलिएको जो थियो, यसलाई चिर्न व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा मैले सक्दो प्रयास गरेको हो ।
भूकम्प गएपछि हाम्रो व्यवसाय नै ठप्पप्रायः बन्यो, अफिस नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । तर, अहिले विस्तारै व्यवसाय एउटा लयमा आउन खोजेको छ । हालचाँहि दीर्घकालिन हिसावले समग्र पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसावले सोचिरहेका छौँ । आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढन सकिन्छ भन्ने हिसावले दीर्घकालिन रुपमा हामी योजना बनाईरहेका छौँ । यसक्रममा अन्य मुलुकहरुमा पनि भूकम्पलगायत विभिन्न प्राकृतिक विपक्ति गएपछाडी पुनरुत्थानका लागि तिनले अख्तियार गरेका योजना र प्रयासहरुलाई हेरेर हामी पनि कसरी अगाडी बढन सक्छौँ भन्ने तवरले हामीले सोचेका छौँ । अव पर्यटन क्षेत्रमा राज्यले लिएका नीति/नियमहरु र तिनका कठीनाईहरुलाई चिर्दै अगाडी बढने तबरबाट सोच्ने कुरा पनि छँदैछ । यसबाहेक आधुनिक प्रविधिसँग परिष्कृत हुँदै पर्यटनको पुनरुत्थानका बारेमा हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने पहलहरु गरिरहेका छौँ ।
तपाइँले व्यत्तिगत रुपमा आफुले गरेका पहलका कुरा गरिरहँदा पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा समग्र निजी क्षेत्रलेचाँहि खास काम गर्न सकेन भन्ने छ नि !
यो एकदमै सहि कुरा हो । निजी क्षेत्रसंबद्ध हाम्रो ठूलो सञ्जाल पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरुले खास काम गर्न नसकेका कुराहरुलाई नकार्न मिल्दैन । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने टान, एनएमएलगायत दर्जनौँ संघसंस्थाहरु छन्, तर तिनले खास काम गर्न सकेनन् । खास काम
गर्नेभन्दा पनि तिनिहरु सस्तो प्रचारबाजी तिर बढता लागे ।
तपाइँले इंकित गर्नुभएका पर्यटकीय संस्थाहरु किन यस्तो गर्छन होला ?
जस्तो म टानकै उदाहरण दिन चाहन्छु । टानले दुईवर्षका कार्यावधिमा देखाउन लायक र परिणामात्मक काम केहि पनि गर्न सकेन । पछिल्लो समय संकट पनि निम्त्यो र सस्तो लोकप्रियता कायम गर्ने दृष्टिकोणले रकम खर्चेर, मिडियावाजी गर्ने काम गर्‍यो, जुन आवश्यक थिएन । आवश्यक पाटोमा ध्यान दिईएन । अरु संघसंस्थाको हालत पनि तात्विक रुपमा फरक छैन् ।
पर्यटन पुनरुत्थानका कामहरु कक्तिको गतिमा अगाडी बढिरहेको तपाइँले देख्नुभएको छ ?
दुःखको कुरा हामीसँग यस्ता संघसंस्थाहरु छन्, जसको पर्यटन विकासमा भूमिका अत्यन्त न्यून छ । अहिल्यै गएर तपाइँले टानका अध्यक्षलाई कतिवटा कम्पनी प्रभावित भए, कति ठाउँमा मर्मत र पुनर्निर्माणका काम भए, कतिवटा रुटमा पर्यटक जान सक्ने अवस्था छ भनेर सोध्नुभयो भने यसको यथार्थ र तथ्यपरक जवाफ पाउन सक्नुहुन्न । किनकी उहाँहरुले यथार्थ तथ्याङ्क तथ्याङ्क निकाल्न सक्नुभएको अवस्था छैन् । बरु हामी केहि व्यवसायीहरुको व्यक्तिगत पहलमा केहि सुधारहरु भएका छन्, तर ठूला संस्थाहरुले खास पहल गर्न नसक्दा कामहरु देखिन सकेका छैनन् ।
टानले खास काम गर्न सकेन भनिरहँदा तपाइँ आफैँ चाँहि त्यहिँ जान किन लालयीत हुनुहुन्छ ?
टानको एक कार्यकाल दुई वर्षको हुन्छ र अवधिमा गर्न सकिने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । यसमा म आफु जाँदा पनि गर्न सकिने अवसरहरु थुप्रै देख्छु । कोहि कि त त्यहाँ जानै हुन्न गएपछि काम गर्नुपर्छ । जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत मामिला छ र मैले टानमा जाने इच्छा जाहेर गरेको छु, मेरो विगत डेढ दशकमा हासिल गरेका अनुभव र ज्ञानलाई सो संस्थामा गएर समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्पस्ट दृष्टिकोणसहित काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको हो । यसैका लागि टानमा आफ्नो प्रतिनिधित्व दावी गरेको हुँ ।
कुन पद र केका लागि तपाइँले प्रतिनिधित्व खोजिरहनु भएको हो ?
मेरो अनुभव र क्षमताको आधारमा म कोषाध्यक्षका लागि इच्छा प्रकट गरेको छु । तर, टानजत्रो संस्थामा धेरै क्षमतावान साथीहरु पनि आउन खोज्नुभएको छ । राम्रो टिम बनाउने मामिलामा बाधक नबनीकन सचिव पदका लागि म खुला छु ।
आफुले उल्लेख गरेको पदमा के कारणले तपाइँ ‘फिट’ हुनुहुन्छ ?
विगतका कार्यसमितिहरुलाई हेर्दा म भन्दा कम क्षमता भएका मान्छे पनि त्यहाँ गएका छन् । तसर्थ मेरो आफ्नो क्षमताले उपयुक्त पदका लागि न्याय दिन सक्छ भन्ने मेरो ठहर छ । विगत डेढ दशकदेखि पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध रहिरहँदा प्राप्त गरेका क्षमता उल्लेखित पदका लागि ‘फिट’ हुने मेरो विश्वास हो ।
टानमा पुग्नका लागि गुट/उपगुटमा कत्तिको संलग्न हुनुहुन्छ नि ?
दुःखको कुरा टानमा राजनीतिक परम्परा हावी हुँँदै आएको छ, आउँदा दिनहरुमा पनि यसको फाटफुट संकेत देखिन्छ । तर, यो गलत छ । राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि व्यवसायीक भागवण्डामा हामी उद्दत रहनुपर्छ । आउँदा दिनहरुमा टानमा राजनीतिक भागबण्डा हुनुहुँदैन, बरु एउटा सक्षमहरुको टिम निर्माण गरेर अगाडी बढनुपर्छ यसले व्यवसायीक हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । यति भन्दैमा राजनीतिमा कुनै पनि चासो नभएका मान्छे त्यहाँ आउँछन भन्ने होईन । तर, यसलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ । मलाई त राजनीतिबाट नाजायज फाईदा लिनु छैन् । व्यक्ति राजनीतिक भए पनि व्यवसायीक हितलाई सर्वोपरी ठान्यो भने त्यो पनि ठिक छ । हामीले राजनीतिलाई नकारात्मक चेतनाले हैन कि यसबाट पनि पर्यटनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने पाटोबाट हेर्दा राम्रै देखिन्छ, तर त्यो प्रवृति देखिएन समस्या यहीँ छ ।
अव टान कसरी अगाडी बढनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा तपाइँको धारणा के हो ?
समग्र पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि संस्था भएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको सकारात्मक छवि भएको कारण टानको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ । तर, यसलाई मागिखाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । भएको स्रोत र साधनहरुको प्रयोग गरेर समग्र पर्यटन व्यवसायीहरु र ट्रेकिङ एजेन्सिजहरुको हक र हितका लागि काम गर्ने खालको हुनुपर्छ, टान । तर, यसका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।
तपाइँको आफ्नो अनुमानमा आउँदै गरेको सिजनमा कति परिमाणमा पर्यटक भित्र्याउने क्षमता राख्छ नेपालले ?
पूर्वाधार विकास यथेष्ट रुपमा नभएको र हाम्रो बारेमा हामीले सकारात्मक सन्देश पनि प्रचार गर्न नसकेको अवस्थामा विगतकै परिमाणमा पर्यटक आउने कुरा चाँही हामी सोच्न सक्दैनौँ । यद्यपी विगतको पर्यटक आगमनलाई आधार मान्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत पर्यटक यो सिजनमा आउन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
यहि हिसावले पर्यटन पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्न कति समय लाग्छ होला ?
आउन पर्यटन क्षेत्र पहिलाकै स्थितिमा थोरैमा पनि दुईवर्ष जति लाग्नसक्ने मेरो विश्वास हो । तर, पर्यटन क्षेत्र नै यसको पुनरुत्थानका लागि बाधक बनेका छन् । पर्यटनकै प्रतिनिधि संस्था टान एनएमएका अध्यक्षज्यूहरुबाटै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निरुत्साहित पार्ने गरेर जो अभिव्यक्तिहरु प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यममा दिनुभयो, यस्तो तरिकाले चाँहि पर्यटन विकास अरु पछि धकेलिन्छ । यसबाहेक आउँदो सिजनमा चाँहि सोचेजति पर्यटक नआउने निश्चित छ, पछिल्लो सिजनबाट सुधार हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
अब पर्यटन विकासका लागि कस्ले के गर्नुपर्छ ?
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई सोचेअनुरुपको व्यवसाय अगाडी नबढेपछि उनिहरुलाई आर्थिक भार परेको छ । यो पूर्ति गर्नका लाग सरकारले केहि पहल गर्नुपर्छ । तसर्थ समग्र पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायीहरुको हक हितका लागि एउटा दीर्घकालिन रणनीति तयार गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एउटा यस्तो चुस्त संयन्त्र तयार गर्नुपर्‍यो ताकि त्यसले पर्यटन क्षेत्रका सबै ‘इस्यु’हरुलाई समेटेर अगाडी बढन सकोस । त्यस्तै निजी क्षेत्र पनि अहिलेकै पारामा अगाडी बढने होईन एकिकृत रुपमा नयाँ कायृयोजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा त सरकार र निजी क्षेत्रले एकापसमा सहकार्य गरेर पीपीपी (पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप) अवधारणाका साथ अघि बढनुपर्छ ।